Hwendefa Kukura: Usage Statistics uye Zvinotarisirwa | Martech Zone
Hwendefa Kukura: Usage Statistics uye Zvinotarisirwa
Svondo, June 29, 2014 Douglas Karr
Ini ndinofarira mushandisi wepiritsi… ndine iPad uye iPad Mini padivi peMacBook Pro yangu ne iPhone. Sezvineiwo zvakakwana, ini ndinoshandisa yega yega zvishandiso zvakanyanya. My iPad Mini, semuenzaniso, ipiritsi yakakwana yekuunza misangano uye pabhizimusi nzendo uko kune kwakawanda kufamba uye ini handidi kukwevera kutenderera palaptop yangu netambo dzese dzinodiwa, majaja, uye zvishongedzo. Yangu iPad inowanzo gara padyo nemubhedha wangu weterevhizheni yekutenga uye kuverenga. Yakanyanya kukura kubhizinesi asi yakakura kutenderedza imba.
Mahwendefa nemalaptop zvakaparadza musika wedesktop. Muna 2013, iyo PC desktop musika yakadonha ne98%! Ini munguva pfupi yapfuura ndakagadzirisazve hofisi yangu yekumba uye desktop yakange yabva pamudyandigere panzvimbo yeiyo laptop stand uye Thunderbolt kuratidza. Uye kugadzirwa kwangu pamba kwakwira sezvo ini ndichingotakura laptop yangu pakati pemahofisi uye handidi kunetseka nezve kubaya mumachaja, kuendesa mafaera, nezvimwe.
Muna 2013 kutengeswa kwepiritsi kwakaputika, ichiwedzera inoshamisa 68% kusvika mamirioni 195.4 miriyoni pasi rose. Nekutengesa kwepasirese kunotarisirwa kurova mabhiriyoni 1 mauniti muna 2017, zvave zvakakosha kune vatungamiriri pamatanho ese kuti vanzwisise kukosha kwemahwendefa uye maitiro avanotungamira mukutenga nekutenderera nevatengi kuita.
Kuona kuti yako saiti inoteerera pakushandiswa kwetablet - pamwe nekutora mukana wepakati pekutsvagisa kwechimiro kana kuvandudzwa kweapp - zvinogona kupa kuvandudzwa kwakakosha mutengi wako uye mushanyi kubatanidzwa pamwe nekutendeuka. Icho chokwadi ndechekuti, vashandisi vepiritsi vane zviitiko zvakasarudzika, sekuverenga nekutenga, izvo zvavanoda chose kushandisa piritsi ravo pamusoro pevanoratidza nharembozha, laptop kana desktop. Ndechipi chiitiko chakafanana nevaverengi vako?
Tags: 2014mahwendefa mangani akatengeswawebhusaiti yewebhuHwendefa kukurapiritsi nzvimboHwendefa manhambapiritsi yekushandisa manhambapiritsi yekushandisa statskufamba uye kushandisa piritsiusingnet
Jun 30, 2014 pa 1: 50 PM
Pane chero munhu arikutarisa yazvino Microsoft piritsi / pc. Ndiri kuzotora imwe nhasi uye edza kubvisa pazvinhu zvese zveApple. Ndokumbira Apple! Ndiri paMacbook pro, iMac, iyo piritsi razvino uye iPhone. F-iyo! Mhoro kuvhura tekinoroji!
Jun 30, 2014 pa 2: 00 PM
Ndiri fan weApple uye handisati ndaona chikonzero chekubva kwavari Nancy.